गोदी पत्रकारिताले रन्थनिएको देश – HostKhabar ::
by कृष्णज्वाला देवकोटा
अहिले नक्सा–युद्ध कसले सुरु गरेको हो ? भारतले । नेपाली भूमिमा तामझामपूर्वक सडक बनाएर र अझ सेनापतिलाई बोल्न लगाएर नेपाललाई उत्तेजित कसले बनायो ? भारतले । ५८ वर्षदेखि अरूको भूमिमा को बसेको छ ? भारत । तर, अब अन्याय कसले गर्‍यो ? नेपालले १ भारतीय च्यानलहरूलाई इतिहासका दस्तावेजहरूसँग केही सरोकार छैन । पाकिस्तान र चीनसँग नयाँ लफडा केही नभएको, जेएनयू सुतेको र कास्मिर दबेको यो शून्यकालमा ती नेपालतिर खनिएका छन्, टिआरपीका लागि ।
नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको
नेताहरु पटक-पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने, कुलमान घिसिङ दोश्रो कार्यकाल नियुक्त हुन किन नपाउने ?
राणाकालमै चल्थ्यो काठमाडौँमा रेल